Archive du 20190722
Vondrona GPR Mihetsika ireo mersenera politika
Samy miketrika mafy ireo depiote eo anivon`ny Antenimieram-pirenena amin`izao fotoana izao. Nitsangana teo anivon`ny Antenimieram-pirenena ny vondrona parlemantera « Groupement parlementaire uni pour la République » (GPR).
Governemanta sy ny tetikasa IEM Hisy ampahany ho vita raha teknisianina no eo
Naneho ny heviny mikasika ny firafitry ny governemanta vaovao, Atoa Feno mpandinika ny raharaham-pirenena, ary nambarany,
Demokrasia eto Madagasikara Miverina aotra isaky ny misolo mpitondra
Takon’ny Barea ny fiainam-pirenena teto Madagasikara nandritra ny iray volana teo ho eo. Amin`izao, tafiditra ao anatin’ny tena fiainana politika isika.
Orange Kitra 2019 Mini Can Norombahin’i Senegal ny fandresena
Norombahin’ny ekipan’ny Les Elites (Senegal) ny fandresena teo amin’ny fifaninanana Orange kitra 2019 Mini Can na fanahafana ny Can 2019 natao tany Egypte ka nandrombahany ny amboara sy lelavola 500.000 Ar tamin’izany.
Ahiana ho fandorana niniana natao Kila forehitra ny tsenan’i Bazary kely Toamasina
Manahy fandorana niniana natao tamin’ilay fahamaizan’ny tsena “Esplanade” ambany ao Bazary kely ireo mpivarotra ankehitriny.
Fiara tapaka hisatra nanitsaka olona Vehivavy iray sy ny zafikeliny maty tany Ambohimandroso
Natolotra ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambatolampy ny raharaha mahakasika ilay fiara tapaka hisatra nahafaty olona roa avy namonjy lanonam-panambadiana.
FANARAHAN-DIA DAHALO NAMPIDI-DOZA Roa maty voatifitra, 3 naratra mafy tany Kiranomena Fenoarivobe
2 maty, telo naratra, basy iray sy omby efatra lasan’ny dahalo. Io no vokatry fanafihan-dahalo ny 14 jolay teo tamin’ny 4 ora sy sasany tolakandro.
FANAFIHAN-DAHALO NISESY TANY MANGAMILA Tsy mbola hita ny omby 3 lasan’ny dahalo
Nateti-piavy ireo jiolahy mpangalatr’omby tato ho ato tamin’iny faritra avaratry ny renivohitra iny, mihazo ny lalam-pirenena fahatelo, indrindra tao Mangamila.